IShedi yeembiza - I-Airbnb
Uvimba sinombuki zindwendwe onguAnn-Marie
Le ndawo ikwilali entle yaseBarrington, iimayile ezisibhozo ukusuka kwimbali yedolophu yaseCambridge. Le lali ineyona ndawo iluhlaza iluhlaza kweli lizwe kunye necawa yembali yaseNorman, indawo eqhelekileyo yomtshato kwiinyanga zasehlotyeni. Ibekwe ngokufanelekileyo ukuthatha ithuba leCambridge, iNewmarket, iMyuziyam yeMfazwe yase-Imperial, iDuxford, iGrantchester, iNational Trust ekhaya eWimpole kunye nokufikelela ngokulula eLondon, kunye noololiwe abakhawulezayo abaya eLondon Kings Cross.
Indawo yaseBarn idityaniswe kwindawo yesibini ka-Airbnb 'Isitali' esingekadweliswa. Ipropathi ineendawo zokufudumeza eziphantsi komgangatho kuyo yonke kwaye inegumbi lokuphumla / ikhitshi elivulekileyo elinefriji yefriji kunye nomatshini wokuhlamba, igumbi lokuhlambela, kunye negumbi lokuhlambela eline-ensuite. Kukho ibhedi yesofa kwigumbi lokuphumla ukuze uthathe iindwendwe ezi-2 ezongezelelweyo.
Nceda uqaphele ukuba igadi ejikelezileyo kunye nommandla ongaphandle zisalungiswa ngoku. Ngexesha lokuhlala kwakho, unokubona iLabrador yethu yeChocolate ethandekayo, iPoppy, ijikeleza ngeendawo, unobuhlobo kakhulu.
4.93 · Izimvo eziyi-187
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi187
Sibekwe phantsi kwendlela eyenziweyo yefama, eneendawo ezininzi zokuhamba ezithandekayo. Akukho sidingo sokungena emotweni, vele uhambe ngqo emnyango kwaye ujikelezwe ngamasimi. Kukho ii-pubs ezilungileyo ezimbalwa ezijikeleze, enye ikumgama wokuhamba. Sinevenkile yasekuhlaleni kunye nepaki yendawo.
UPeter okanye mna siya kuhlala sikhona njengoko sisebenza ekhaya ngoku, siya kuba lapho ngayo nayiphi na imibuzo onayo.